Par Taratra sur 10/11/2017
Zandry Gasy – Piment Café
Ela izay… Anisan’ny toerana nanombohan’ny tarika Zandry Gasy nisongadina ny tetsy amin’ny Piment Café Behoririka. Efa elaela izy ireo no tsy niaka-tsehatra tao, ka hamaly ny fangatahan’ny mpankafy lanonana amin’ny alina indray, anio. “Hiverina an-doharano”, hoy ny filazan’i Mbola Talenta, satria hamerina ireo hira nahafantarana azy, indrindra ireo anatin’ny rakikira “Vakoka sy soatoavina” ny Zandry Gasy. Fotoana hampahafantarana ireo vokatra vaovao, izay horaketina anatin’ny rakikira faharoa ihany koa anefa izany.
R’Ikala Vazo – Kianjan’ny Kanto
Hiova kely, handray tarika hafa ny Kianjan’ny Kanto, anio alina. Tsy tarika vaovao amin’ny toerana anefa, satria efa maro ireo nahita ny rakitsarin-dry Ikala Vazo notontosaina tao. Hizara ny talentany ao indray ireto tovovavy mpanakanto manana ny fiavahany ireto, manomboka amin’ny 9 ora alina. Ankoatra ny hirany manokana, fanta-daza amin’ny famerenana hirana mpanakanto hafa, saingy amin’ny fanaovany azy ry Vanintsoa, Mitchou ary Mirana. Anisan’ny be mpankafy ny “Options” an’i Pit Bull sy Marley, izay naverin’izy ireo…
Tselonina eny amin’ny Serre à Sera
Pimaso ho an’ireo mpankafy ny tena vazo miteny! Manome fotoana ireo tena mpankafy azy indray ingahibe Tselonina, etsy amin’ny Serre à Sera Ambolonkandrina, anio alina. Malalaka tsara ny fotoana hamerenana ny “Vazo Tselonina”, araka ny fiantson’ny mpirevy ambony tamboho azy. Hanaingo ny seho sy hanaraka azy amin’izay i Fara Gloum, niantsoroka ny feom-behivavy nandritra ny fotoana maharitra niaraka tamin’ingahibe Tselonina.